Kugadziridza iyo Nzira Yekushandura Kutungamira kune Mutengi | Martech Zone
Iko kushomeka kwemakambani anoda rubatsiro nekutendeuka kwevatengi. Isu tese takabatikana zvakanyanya uye takagara takagwinya mukugadzira zvigadzirwa zvikuru nemasevhisi, asi kazhinji zvinokanganisa kupa nzira yakatsetseka yekutungamira kuti uuye mutengi. Kushambadzira tekinoroji inopa maturusi ekubhara iro gwanza uye kusimudzira iwo anotungamira zvakanaka.
Mune ino infographic kubva ReachLocal, iwe unozotora rwendo uine yekutungamira inotungamira, nzira yese kubva pakutanga kwayo seye tarisiro yekuve mutengi kune rimwe bhizinesi remuno. Pakati penzira iwe unosangana nemutengi wemuno anotsvaga, vanobata, uye pakupedzisira anosarudza bhizinesi remuno. Uye, iwe uchaona mashandisiro anoshanda ekutsvaga enjini yekushambadzira matekiniki, webhusaiti akanakisa maitiro, uye otomatiki manejimendi manejimendi anobatsira edu emuno bhizinesi kusvika kumutengi sezvo iye achimuita kutenga kwake sarudzo.
Mari yakadonha zvakanyanya kumakambani kutora mukana wekuti vatengi varikutsvaga kutenga kwavo kunotevera - kunyangwe injini dzekutsvaga, vezvenhau, kana nhare. Iko hakuna chaicho chikonzero chakanaka futi chekuti bhizinesi riite mari uye kutarisira kudzoka pane iyo mari. Zviri kungo tsvaga agency kana tekinoroji shamwari inokubatsira munzira.
Tags: kushambadzakupindukanzira yekutendeukakasitomaTungamirakutungamirira kutarisiraYeMahara neThebhu Kushambadziranzira yekutendeukakubhadhara pakukandappcushambadziruchitoncokutsvaga injinisearch engine marketingSearch Engine Optimizationseo